အစဉျအမွဲနာမ်စားသူတွေကိုများမှာ နာမ်စား ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အရာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ အောက်ပါစာရင်းတွင်သည်ဤအင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်နှစ်ဦးစလုံး၌ရှိကြ၏ pronouns ရာဖော်ပြသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်စပိန်မှာတော့အစဉျအမွဲနာမ်စားအဖြစ်အသုံးပြုစကားအများဆုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မကြာခဏအဖြစ်မိန့်ခွန်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် adjective နာမဝိသေသန အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံနှင့် ဖိုင်လင့်များပါသည့် ။ စပိန်မှာအစဉျအမွဲနာမ်စားအချို့ပုလ်နှင့်ဣတ္နှစ်ဦးစလုံးပုံစံများအဖြစ်အနည်းကိန်းနှင့်အများကိန်းပုံစံများအတွက်တည်ရှိဒါကြောင့်သူတို့ကရမယ် သဘောတူ သူတို့ရည်ညွှန်းသည့်နာမ်အတူ။
alguien - တစ်စုံတစ်ဦး, တစ်စုံတစ်ယောက်, မည်သူမဆို, ဘယ်သူ့ကိုမှ - Necesito တစ် alguien Que pueda escribir ။ (ကျနော်ရေးနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုလိုအပ်။ ) ¿ငါ့ကိုllamó alguien? (ဘယ်သူ့ကိုမှငါ့ကိုပဌနာသလား)
algo - တစ်ခုခု - Veo algo Grande y က Blanco ။ (ကျနော်ကြီးတွေနှင့်အဖြူတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါ။ ) ¿ Aprendiste algo esta tarde? (သင်ကဒီနေ့လယ်တစ်ခုခုသင်ယူခဲ့သလား)
alguno, alguna, algunos, algunas - တဦးတည်း, အခြို့ (အမှုအရာသို့မဟုတ်ကလူ) - Puedes suscribirte တစ် alguno က de nuestros servicios ။ (သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ ) ¿ Quieres alguno စရဖ? (သင်တဦးတည်းကပိုချင်ပါသလား) Voy တစ် estudiar con algunas de las Madre ။ (ငါမိခင်များအချို့နှင့်အတူလေ့လာပါမယ်။ ) Algunos quieren salir ။ (အချို့စွန့်ခွာချင်။ )
cualquiera - ဘယ်သူ့ကိုမှ, မည်သူမဆို - Cualquiera puede tocar la guitarra ။ (မည်သူမဆိုဂစ်တာကစားနိုင်ပါတယ်။ ) - အများကိန်း, cualesquiera, ခဲကိုအသုံးပြုသည်။
mucho, mucha, muchos, muchas - အများကြီး, များစွာသော - ငါ့ကို queda mucho por hacer ။
(ကျနော်အများကြီးလုပ်ဖို့ကျန်ကြွင်းစေပြီ။ ), La escuela Tien mucho Que ofrecer ။ (အဆိုပါကျောင်းမှပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ) Somos muchos ။ (ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်။ လီတာ, ကျနော်တို့အများဖြစ်ကြ၏။ )
nada - ဘာမျှမ - Nada ငါ့ကို parece cierto ။ (အဘယ်အရာကိုမျှငါ့ထံသို့မတယောပုံရသည်။ ) အဘယ်သူမျှမ tengo nada ။ (ကျနော်ဘာမျှမရှိသည်။ ) - nada တစ်ကြိယာအောက်ပါအတိုင်းသောအခါ, ကြိယာရှေ့ဝါကျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်လည်းအောင်, အနုတ်လက္ခဏာပုံစံအတွက်ထားကြောင်းမှတ်ချက် နှစ်ဆအနုတ်လက္ခဏာ ။
nadie - ဘယ်သူမှအဘယ်သူမျှမ - Nadie ငါ့ကိုခရီး။ (ဘယ်သူမှငါ့ကိုမယုံကြည်သည်။ ) အဘယ်သူမျှမ conozco တစ် nadie ။ (ကျနော်ဘယ်သူမှသိကြ၏။ ) - nadie တစ်ကြိယာအောက်ပါအတိုင်းသောအခါ, ကြိယာရှေ့ဝါကျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်လည်းနှစ်ဆအနုတ်လက္ခဏာအောင်, အနုတ်လက္ခဏာပုံစံအတွက်ထားကြောင်းသတိပြုပါ။
ninguno, ninguna - အဘယ်သူအားမျှဘယ်သူမှအဘယ်သူမျှမ - Ninguna က de အဲလာ va အယ်လ် parque ။ (သူတို့ထဲကအဘယ်သူမျှမပန်းခြံသွားကြသည်။ ) အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ ninguno conozco ။ (ကျနော်ဘယ်သူမှသိကြ - ။ မှတ်ချက် ninguno တစ်ကြိယာအောက်ပါအတိုင်းသောအခါ, ကြိယာရှေ့ဝါကျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်လည်းအနုတ်လက္ခဏာပုံစံအတွက်ထားကြောင်းအများကိန်းပုံစံများ (ningunos နှင့် ningunas) တည်ရှိပေမယ့်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုကြသည်။ ။
otro, otra, otros, otras - အခြား, အခြားတဦးတည်း, အခြားတစုံတယောက်ကိုအခြားသူတို့, အခြားသူတွေ - Quiero otro ။ (ကျနော်အခြားတဦးတည်းချင်တယ်။ ) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los otros ဗန်အယ်လ် parque ။ (အဆိုပါအခြားသူတွေပန်းခြံကိုသွားကြပါတယ်။ ) - Un otro နှင့် una otra အတွက်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ် "အခြားတပါးတည်း။ " Otros နှင့် ဆက်စပ်နာမ်စားလို့ရပါတယ် တစ်ဦးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဆောင်းပါး ဒုတိယဥပမာထဲမှာအဖြစ် (el, la, los သို့မဟုတ် Las) ။
poco, poca, pocos, pocas - နည်းနည်း, နည်းနည်းအနည်းငယ်အနည်းငယ် - Tengo un poco က de miedo ။ (ကျနော်ကြောက်စိတ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ) Pocos ဗန်အယ်လ် parque ။ (အနည်းငယ်ပန်းခြံသွားကြသည်။ )
todo, Toda, todo, Toda - အရာအားလုံး, ရှိသမျှလူတိုင်း - El comió todo ။ (သူကအရာခပ်သိမ်းကိုစားကြ၏။ ) todo ဗန်အယ်လ် parque ။
(အားလုံးပန်းခြံကိုသွားကြပါတယ်။ ) - အနည်းကိန်းပုံစံထဲမှာ, todo သာရှိ လိင်မပါသော (todo) ။
UNO, una, unos, unas - တဦးတည်း, အခြို့ - UNO မျှ puede creer အပြစ်တရား hacer ။ (တစျခုလုပ်နေတာမရှိဘဲမယုံကြည်နိုင်ပါ။ ) Unos quieren ganar စရဖ။ (အချို့ကပိုဝင်ငွေရချင်တယ်။ ) Comí UNO က y deseché el otro ။ (ကျနော်တဦးတည်းကိုအတူစားကြသည်နှင့်အခြားကွာပစ်ချ၏။ ) - UNO နှင့်၎င်း၏မူကွဲမကြာခဏတတိယဥပမာ၌ရှိသကဲ့သို့, otro ၏ပုံစံများနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုကြသည်။
အချို့သောကွဲပြားခြားနားသောနာမ်စား English သို့တူညီသောဘာသာပြန်ထားသောနေကြသည်သော်လည်း, သူတို့သည်သေချာပေါက်လဲလှယ်ကြသည်မဟုတ်။ အသုံးပြုမှုအတွက်သိမ်မွေ့ကွဲပြားမှုအချို့ကိုရှင်းပြဤသင်ခန်းစာ၏ဘောင်ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ များစွာသောအမှုများမှာနာမ်စား English သို့တစ်ဦးထက်ပိုလမ်းအတွက်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်; သငျသညျအဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျဖို့ရှိသူများကိစ္စများတွင်အခြေအနေတွင်အပေါ်အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။
စပိန် Feminine Noun ဘို့ '', La '' အတွက် 'အယ်လ်' 'အစား
အီတလီကြိယာ conjugation: Mettersi
Beaucoup des - အဖြစ်များသည့်ပြင်သစ်အမှား
အီတလီ preposition Tra နှင့် Fra
အီတလီကြိယာ conjugation: Trascorrere
အားလုံးပြင်သစ်အကြောင်းတရားများ ( 'le Causatif') အကြောင်း
သွယ်ဝိုက်-Object ကို Pronoun နှင့်အတူအသုံးပြုကြိယာ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု: IPCC ရဲ့စတုတ္ထအကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ
ကို Hack Attack! 18 အလွန် Funny Hack ဆောက်လုပ်ရေးလက္ခဏာများ
ဒွန် Gibson အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: 1765 ၏တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ
ရွှေလင်းတ၏အသင်းဝင်များအားဖြင့်ထိပ်တန်း '' 80s တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းများ
ဒုတိယအ Seminole စစ်ပွဲ: 1835-1842
Au Contraire - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
ပထမကမ္ဘာစစ် III ကိုဟောကိန်းများနှင့် Nostradamus
ပြင်သစ်အတိတ်မှ participle: ပါဝင်သူ Pass
, သမပူနွေးခြင်း, အအေးပိုင်းဇုန်
အဘယ်အရာကို Monatomic ဒြပ်စင်များမှာနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကတည်
'' အဆိုပါညီအစ်မ '- TLC ရဲ့ဟောပြော' 'ဇနီး၏ Cast ကိုပြရန်